Ch 7 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 7 Matthew
7:1 "Aza mitsara, mba tsy hotsaraina.
7:2 Fa araka ny fitsarana ataonareo mitsara na inona na inona, dia toy izany no hitsarana anao; ary na inona na inona ohatra no hamarana, dia toy izany no ho norefesiny miverina atỳ aminao.
7:3 Ary ahoana no mahita ny mpisintaka ao amin'ny mason'ny rahalahinao, ary tsy hahita ny solaitrabe eo amin'ny masonao?
7:4 Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao, 'Avelao aho handray ny mpisintaka amin'ny masonao,'raha, indro, ny birao dia amin'ny masonao?
7:5 Ry mpihatsaravelatsihy, Esory aloha ny birao eo amin'ny masonao, ary avy eo dia ho hitanao tsara ny hanesorana ny ampy mpisintaka avy amin'ny mason'ny rahalahinao.
7:6 Aza omena ny alika ny zava-masina, ary aza dia hariako eo eo anoloan'ny kisoa ny perla, fandrao hanitsaka azy mba eo ambany ny tongony, ary avy eo, fihodinana, mba hamiravira anareo masina.
7:7 Anontanio, ary dia homena anareo. Mitady, ka hahita. Knock, dia hovohana ianareo.
7:8 Fa izay rehetra mangataka, mandray; ary na iza na iza mitady, no mahita; ary ny olona izay mandondòna, hovohana.
7:9 Sa iza no olona eo aminareo, izay, raha manana zanaka dia hanontany Azy ny mofo, no hanome azy vato;
7:10 na raha dia mba hanontany azy ho trondro, no hanome azy menarana?
7:11 Noho izany, raha ianao, na dia ratsy, mahalala hanome zava-tsoa ho ny zanakao, mainka fa ny Rainareo, Izay any an-danitra, hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy?
7:12 Noho izany, ny zava-drehetra na inona na inona izay tianao fa ny olona no manao aminareo, hanao izany koa ho azy ireo. Fa izany no lalàna sy ny mpaminany.
7:13 Midira vavahady tery. Fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana, izay mitondra any amin'ny fahaverezana, ary maro misy miditra ny alalan 'izany.
7:14 Ahoana no èty ny vavahady, ary ny fomba mahitsy ny lalana, izay mankany amin'ny fiainana, ary vitsy misy mahita azy!
7:15 Mitandrema ianareo, fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitoha izy.
7:16 Hianao no hahafantaranareo azy ny voany. Afaka voaloboka hangonina avy amin'ny tsilo, na aviavy amin'ny songosongo?
7:17 Koa dia, ny hazo tsara rehetra dia mamokatra voa tsara, ary ny hazo ratsy mamoa voa ratsy.
7:18 Ny hazo tsara tsy afaka mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy dia tsy afaka mamoa voa tsara.
7:19 Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo.
7:20 Noho izany, Ny voany no hahafantaranareo azy.
7:21 Tsy izay rehetra milaza amiko, 'Tompo ô, Tompo,', No hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa na iza na iza no hanao ny sitrapon'ny Raiko, Izay any an-danitra, dia izy no hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra.
7:22 Maro no hanao amiko amin'izany andro izany, 'Tompo ô, Tompo, moa ve izahay tsy efa naminany tamin'ny anaranao, sady namoaka demonia tamin'ny anaranao, ary hanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao?'
7:23 Ary dia hambarako hamoaka azy: 'Tsy mbola mahafantatra anao. Mialà amiko, ianareo mpanao ratsy. '
7:24 Noho izany, izay rehetra mandre izany teniko izany ka mankatò azy, dia azo ampitahaina ny hendry, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy.
7:25 Ary nidina ny orana, ary ny tondra-drano nitsangana, sady nifofofofo ny rivotra, ary nihazakazaka teo izany trano, nefa tsy nianjera, satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy.
7:26 Ary izay rehetra mandre izany teniko izany ka tsy manao azy ho toy ny adala, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika.
7:27 Ary nidina ny orana, ary ny tondra-drano nitsangana, sady nifofofofo ny rivotra, ary nihazakazaka teo izany trano, ary izany dia lavo, , ka loza ny faharavana. "
7:28 Ary nony, i Jesosy efa nahavita ireo teny ireo, fa ny vahoaka talanjona tamin'ny fampianarany.
7:29 Satria nampianatra azy toy izay manana fahefana, fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo.